Android 11 pane Raspberry Pi uchishandisa LineageOS-based vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga 2020 isu takanyora chinyorwa chatakatsanangura maitiro ekuisa Android TV pane inozivikanwa raspberry bhodhi. Mumusoro wenyaya isu takatombozvibvunza isu kuti "zvine zvazvinobatsira here?", Kunyanya tichifunga kuti zvishandiso zvine Android TV zvakachipa, asi chero sisitimu yakakosha kana isu tatova neayo uye mamwe maMicDSD ekuwedzera. Ndiyo imwe yemasimba eRaspberry Pi: kushandura kadhi, isu tinoshandura iyo system, uye heino tiri kuzokuratidza maitiro ekuiisa Android 11.
Pane nzira dzinoverengeka dzekuisa Android pane Raspberry Pi, asi hazvisi zvese zviri nyore, shanda mushe, kana zviri zvechizvino-zvino. Iyo projekiti yaigara ichishanda mushe yaive CyanogenMod, iyo yakafa kuti ikwire kubva mumadota ayo se LineageOS. Izvo zvazvinotipa zviri pamutemo kune iyo Raspberry Pi ndeye Android 7.x, asi KonstaKANG iri kutarisira kuivandudza kune yazvino vhezheni, uye ndinofunga iri kuita basa rakanaka. Iwe wagadzira mifananidzo yakawanda yezvishandiso zvakasiyana uye yazvino imwe yebhodhi inozivikanwa kwazvo pamusika ndeye LineageOS 18.1.
1 Android 11 pane yako Raspberry Pi
2 Zvirinani pane Android TV?
Android 11 pane yako Raspberry Pi
Chinhu chakanyanya kukosha muchinyorwa chino kutaura kuti uyu anovandudza nebasa rake zviripo. Kana tangozviziva, maitiro ekumisikidza akafanana nenguva dzose:
Isu tinoenda kune rekuvandudza peji. Kubva 30/3/21, vhezheni yazvino iripo iri pa Iyi link. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti musimudziri haasi chikamu chehurongwa hukuru uye kuti anofarira kuti isu tisaise zvakabatana zvinongedzo kune anotora, asi kune yake webhusaiti Tinoita sezvizvi. Zvakare, kune rwakawanda ruzivo rwakanangana ipapo, senzira yekuisa maGApp kana maitiro ekupinda muKutora Modi.
Kamwe iyo faira radzingwa, tinorisunungura. Zvinotaridza zvakanaka kutaura nezvazvo nekuti ini ndangobva kukanganwa uye nhanho inotevera haina kufamba zvakanaka.
Isu tinobhenekera iyo mufananidzo pane microSD kadhi. Kune izvi tinogona kushandisa nzira dzakasiyana, asi ini ndinokurudzira Etcher.
Kamwe maitiro acho apera, isu tinovhura iyo partition maneja. Ndinokurudzira GParted; iyo inobva KDE yakatamba zvinyengeri pandiri.
Tinodzvanya kurudyi uye sarudza "Resize".
Chikamu chekupedzisira, tinochitambanudza kuitira kuti chizadze iyo yese isina chinhu nzvimbo. Kana nekuda kwechimwe chikonzero isu tichida, isu hatigone kuenda munzira yese uye nekugadzira imwezve chikamu.
Tinodzvanya pane "V" kuti shanduko dziite.
Isu tinotora kadhi kubva muPC, riise muRaspberry Pi uye titange. Iyo wizard yakafanana neiyo yeiyo LineageOS yakavakirwa pa Android-x86.
Kana isu tichida kushandisa GApps, zvakakurudzirwa, tinovatora kubva Iyi link (Izvi hazvikuvadze kuti tinozviisa) uye isa iyo ZIP mu USB.
Isu tinoenda kuZvirongwa / Sisitimu, tinoratidzira «Yepamberi» uye tinopinda «Kushanda».
Mu «Simba menyu» isu tinoshandisa «Yepamberi yekutangazve».
Zvino, tinodzvanya uye kubata F5, tinodzvanya pa «Tangazve» uyezve pa «Kudzorera»
Tichaisa, tinosarudza iyo USB, uye iyo ZIP neGApps uye tinotsvedza bhatani rebhuruu kurudyi kuratidza. Kana isu tatanga tichava neGoogle Play, kubva kwazvinofanirwa kurodha pasi imwe browser.
Zvirinani pane Android TV?
Mushure mekuyedza iyo kwechinguva, uye kuva neiyo Android TV, ndinofunga hongu zvirinani. Zvichida kuti imwe vhidhiyo kana sevhisi haina kutaridzika seyakanaka mubhokisi rakagadzirwa, asi mashandiro asingashande pane Android TV basa. Chiitiko ichi chinovandudza zvakanyanya kana isu tine keyboard ine yakasanganiswa yekubata pani, nekuti izvo zvatichava nazvo pachiratidzu chedu zvichave zvakafanana nezvatinazvo parunhare neGoogle's mobile operating system. Semuenzaniso, Teregiramu inoshanda zvakakwana, uye tinokwanisa kuvhura Firefox zvakananga tisina kuisa Sideload Launcher. Pasina kutaura vese emulators. Uye zvakare, inowirirana neiri IR kutonga, uye akawanda mashandiro anowiriranawo nekiyi dzekufambisa.
Kunyangwe ichishanda mushe, KonstaKANG Iyo inotitaurira zvakare pawebhusaiti yayo maitiro ekugadzirisa pasina kurasikirwa nedataKunyangwe hazvo maitiro acho ari ekugadzira kopi yekuchengetedza, chinja iyo yekare system neiyo nyowani uye uwane kopi yacho. Kana ikaenda sepakutanga, ini ndaisakurudzira kukwidziridzwa, kunze kwekunge yawedzera basa nyowani kana rutsigiro rwatinoda. Zvandiri kujekesa nezvazvo ne = Android 11 ini ndine yakanakisa multimedia nzvimbo pane iyo Raspberry Pi. Uye kana ndikapotsa chimwe chinhu, ndinogona kugara ndichichinja kadhi uye kudhonza iyo Manjaro ARM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa Android 11 pane Raspberry Pi uchishandisa LineageOS-yakavakirwa vhezheni
Gustavo Aramayo akadaro
Inoenderana here nevakuru raspberries?
Pindura Gustavo Aramayo
Zve RP3 une izvi: https://konstakang.com/devices/rpi3/LineageOS17.1/
Kana uchida, unogona kuedza kuona kana zvichikukodzera. Chinhu chega chaungarasikirwe nayo inguva yemuedzo. Kana iwe uchida kuitamba yakachengeteka, iyi ine rutsigiro rwepamutemo.